Amaphaneli asebenzisanayo ebhodi lenqwaba
Amaphaneli asebenzisanayo wochungechunge olusha lwe-Qomo: Isistimu ye-Android 8.0 noma isistimu ye-Windows ozikhethela yona.Ukuthinta kwamaphoyinti angu-20 nokubhala amaphuzu angu-10. Usayizi utholakala ngo-55″ / 65″/75″ /86″
Iphaneli yokubonisana isetshenziswa kakhulu ezikhungweni zokuqeqesha, amagumbi okuhlangana, amamnyuziyamu kanye nezinhlaka zokuphepha zomphakathi.
Qaphela: Sisekela uhlobo lwe-Qomo lwedemo ngenkathi ekukhiqizweni ngobuningi senza i-OEM/ODM
Konke kuphaneli eyodwa
Hlanganisa iKhompyutha, i-TV, ibhodi elimhlophe, ibha yomsindo, iProjector kanye nemisebenzi yedivayisi ye-AD kokukodwa
Isikrini se-4K UHD
4K UHD anti-glare LG screen.Ubuchwepheshe obuphezulu obubukeka.Ikhwalithi yesithombe enhle kakhulu. Okubonayo yilokho okutholayo
Isibuko sesikrini esingenantambo
Amafasitelana ethu akusiza ukuthi wabelane ngombono wakho esibukweni kusukela kufoni/incwajana/ikhompyutha yakho, ukuxhumana nje okungenantambo nesofthiwe ye-Eshare kumaphaneli.
Interactive multi-touch esebenza kahle kakhulu
20 amaphuzu touch. Sekela konke ukubhalwa komthombo nesichasiselo. Ivumela abasebenzisi abaningi ukuthi bahlanganyele ngesikhathi esisodwa. Ngokuthinta okushelelayo nokuphendulayo, noma ubani angathatha amanothi, abhale futhi adwebe esikrinini, okwenza ikilasi libe yindawo yokusebenzisana ngempela.
Woza nesofthiwe yemfundo yamahhala
Isoftware ye-Digital white board ye-Flow isebenza! I-pro ihlanganisa ukuvikeleka kwezinga lebhizinisi nezinkulungwane zezinsiza zokufundisa namathuluzi esichasiselo ukuze kuthuthukiswe indlela iqembu lakho elixhumeka ngayo futhi lihlanganyele.
Uhlelo lokusebenza olubanzi
Amaphaneli ayisicaba asebenzisanayo e-Qomo aletha ukusebenza kahle emakilasini akho nasemaqenjini akho ukuze ukwazi ukuxhumana kalula nganoma yisiphi isikhathi. Ngomklamo wozimele omncane ongasindi, ukukhetha kwesistimu ye-Android noma ye-Windows, amathuluzi ashumekiwe kanye nesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esiqondene nawe, yisixazululo esiphelele sokubambisana okungenazihibe esikoleni nasehhovisi.
Ukupakisha kwamaphaneli asebenzisanayo:
Ukupakishwa okujwayelekile yikhathoni elingu-1pc/1
Uma udinga ikhreyithi yokhuni ukuze uvikele ukuthunyelwa kwe-LCL, udinga izindleko ezengeziwe.
Olandelayo: Qomo Bundleboard flat panel display
Okwedlule: I-Qomo desktop Doc Cam enosayizi wokudubula we-A4
eshibhe interactive flat panel
Interactive flat panel intengo
intengo iphaneli esebenzisanayo
Imininingwane esheshayo ye-BundleBoard
Idatha yezobuchwepheshe ye-BundleBoard
Incwadi yomsebenzisi ye-Bundleboard